Maitiro ekuisa Wifislax pakombuta yedu | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi iwe uchitoziva iro rakakurumbira Wifislax yekuparadzira, iyo Slackware-yakavakirwa kugovera iyo inoshanda kune ita ongororo pane edu asina waya netiweki uye woongorora kuti vakachengeteka zvakadii, kukwanisa kusvika bvisa makiyi eWiFi kutarisa kusimba kwaro. Nhasi tichazodzidza maitiro ekuisa ino sisitimu yekushandisa pakombuta yedu nekusingaperi, kuti tigare tichiiwana iripo.
Kunyangwe ichi chinoshanda system kazhinji inotakurwa pane mhenyu CD uye haina kuiswa, kakawanda inogona kunakidza kuisa iyi sisitimu inoshanda, nekuti nenzira iyi tichagara tichiwana kuti tiite ongororo dzekuchengetedza tisingavimbe nedisk kana pendrives.
1 Dhawunorodha vhezheni yazvino yeWifislax
2 Bhurawuza mhenyu CD modhi pane yako yaunofarira desktop
3 Dzvanya pane yekumisikidza menyu
3.1 Chikamu hard drive
3.2 Isa inoshandisa system
3.3 Isa GRUB
Dhawunorodha vhezheni yazvino yeWifislax
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuenda kune iyo Wifislax yepamutemo webhusaiti uye kurodha yazvino vhezheni yeiyi inoshanda sisitimu. Kana uchida know more nezve yazvino vhezheni uye yayo nhau, ini ndinokuraira iwe ichi chinyorwa nezve zvese zvine chekuita neshanduro yazvino yeiyi sisitimu inoshanda.
Bhurawuza mhenyu CD modhi pane yako yaunofarira desktop
Kana tangotora pasi Wifislax uye isu "tazvipisa" paDVD kana kuzviisa pendrive, isu tichaenderera mberi kubhodhi iyo inoshanda system mune mhenyu CD modhi. Chekutanga sarudzo ichaonekwa ndiko kusarudza kernel, kukwanisa kusarudza pakati peSMP yezvigadzirwa zvazvino uye kernel 486 yemidziyo yekare. Kana tangosarudza idzi sarudzo, zvinotitorera kusarudzo yekusarudza desktop, kuve neiyo KDE desktop yemakomputa mazhinji uye Xfce desktop yemakomputa-mashoma emakomputa. Kana tangodzvanya desktop yatiri kuda, isu tinofanirwa kumirira zvishoma kuti OS itange (iyo nguva yainotora inoenderana nekuti tiri kushandisa pendrive kana DVD uye pakumhanya kwekuverenga kweiyo USB chiteshi kana DVD kuverenga iyo PC).
Dzvanya pane yekumisikidza menyu
Kunyangwe mushanduro dzakapfuura zvaive zvakaoma, iyo Wireless chengetedzo timu yakarerutsa zvikuru zvinhu kuisa Wifislax. Isu tinongofanirwa kuenda kune wifislax, kuisa wifislax uye tinya pane kuisa Wifislax.
Chikamu hard drive
Kana yedu hard drive iri nyowani uye isati yagovaniswa (kana isu tatova neyakakamurwa hard drive, enda zvakananga kune yekuisa inoshanda sisitimu chikamu), iyo inoshanda zvinobva zvangoendesa isu kuchirongwa cheGparted, kwatinofanira kugadzira tafura yekuparadzanisa uye kugovera kwatinoda kuisa Wifislax, chimwe chinhu chatichaita nekungodzvanya pane rakaomarara dhiraivhi uye nekudzvanya kugadzira chikamu. Ipapo isu tinofanirwa kumanikidza iyo green green tick uye kumirira iyo kuti ifomatire iro rakaomarara dhiraivhu uye nekuita inoenderana shanduko
Isa inoshandisa system
Kana tangoita chikamu, tichazvigamuchira kuitira kuti zvigotitorera isu kumisikidzwa kweiyo inoshanda sisitimu. Iye zvino tichawana iri yakapusa menyu iyo Izvo zvichatibvunza isu muchikamu chipi chatinoda kuisa yedu Wifislax. Kana tango sarudza iyo, isu tinofanirwa kumirira zvishoma kuti iise iyo, nguva inoenderana nesaizi yedhisiki rakaomarara uye nerudzi rwehard disk (SATA3, SSD ...). Iyo vhezheni yeWifislax iyo ichaiswa ndiyo yatakasarudza patinotanga, semuenzaniso, kana isu takatanga Wifislax muKDE, ichaiswa pamwe neiyo KDE desktop, kana isu takasarudza iyo Xfce sarudzo ichaiswa pamwe ne Xfce desktop.
Kuti titange Wifislax zvakajairika, isu tinofanirwa kuisa iyo GRUB boot loader, chimwe chinhu chichaitwa otomatiki kana iyo Wifislax kuisirwa kwapera. Uyu maneja anotarisira "kuita semurevereri" pakati peBIOS nehurongwa hwekushandisa, kubvumira komputa kuti ione uye kutanga akasiyana masystem ekushandisa atakaisa. Kuti tiise iyo, isu tinongofanirwa tinya pane GRUB sarudzo uye kumirira kuti ipedze. Kana zvese zvinhu zvave kugadzirira, tichava neWifislax yakaiswa pakombuta yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa Wifislax pakombuta yedu
Yakanaka 69 akadaro
Handisi kukunzwisisa iwe xd
Pindura Golosa 69
«Kana tangotora pasi Wifislax uye" takaipisa "paDVD kana kuiisa pendrive»
Iko kudzidzisa shit uko kwavanotora zvinhu zvisina basa uye vachiuya nechakadai vasina kutsanangura maitiro ekuzviita.